The Sikorsky S-76 helikopta Mmụọ bụ a azụmahịa ngwaahịa site US emeputa Sikorsky Aircraft Corporation, bụ vasatail na-ajụ helico. Ọ na-onwem na abụọ rotors ọ bụla na anọ UM UBARA na a retractable ọdịda gia.
ikenyeneke mbiet add-on maka FS2004 tupu payware ugbu a freeware kemgbe afọ 2011 site na Nemeth Designs. -Agụnye 4 repaints tinyere a 2D panel dị mma nke ukwuu na 3D kokpiiti. Ingdọ aka na ntị, ọ dị ezigbo mkpa ịgụ akwụkwọ ntuziaka ahụ.
Onye edemede: Nemeth Designs